Myanmar I-Film Fest... (မြန်မာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်): Namastey London/Hello London/नमस्ते लंदन/نمستے لندن (အင်္ဂလန်)
Namastey London/Hello London/नमस्ते लंदन/نمستے لندن (အင်္ဂလန်)
Globalization ခေတ်ရောက်လာတာတဲ့အမျှ ရုပ်ရှင်တွေလည်း Global ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို အင်္ဂလန်မှာရိုက်ကူးပြီး အိန္ဒိယနဲ့ အနောက် တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေပေါင်းစပ်ထားလို့အိန္ဒိယကားစစ်စစ်လို့ပြောလို့မရသ လို အင်္ဂလိပ်ကားလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Globalization ခေတ်မှာ ပေါ်ထွန်းလာ နေတဲ့ ရှေ့ဆက်လည်း ကြုံတွေ့ ရမဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအသစ်၊ လူနေမှုစနစ်အသစ် ကိုပြထားလို့ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
Jasmeet "Jazz" is an Indian who loves everything that is British - something her father,avery Indian man with very Indian values, does not approve of. Imran Khan who also embraces Western culture. In fact, he lives with his British girlfriend, something his parents cannot tolerate. Jazz is forced to marryafarmer from India named Arjun. When the couple come back to London, it turns out that they are not married under British law due to Jazz's deception to her father. Arjun is crushed to find this out. Furthermore he realises that his beautiful bride still intends to marry her British boyfriend, thus being forced to watch as Jazz flirts with another man. However, Arjun won't give up...
ဘာသာစကား (Language) - ဟင်သီ၊ အင်္ဂလိပ် (Hindi, English)
ရုံတင်သည့်နှစ် (Date of Release) - ၂၀၀၇ (2007)
အမျိုးအစား (Gerne) - ဟာသ အချစ်ဇာတ်လမ်း (Comedy Romatic)
Popup Testing for google
ကောင်းပါတယ်၊ အလယ်မရောက်တရောက်မှာ နဲနဲဆွဲ ထားတာကလွဲလို့။ Bombay to Bangkok ဆိုတဲ့ဇာတ် ကား ကြော်ငြာ London airport မှာ တချက်တွေ့ လိုက်တယ်။ အနောက်တိုင်းမှာရိုက်တဲ့ Bollywood ကား တွေကသိပ်မဆန်းပေမဲ့ BtB ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ Europe က ဇာတ်ကားတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် တင်ပေးပါ လား။ ဗဟုသုတရတာပေါ့။
the gal is cute heee